» अन्तरवार्ताः कोशकार प्राध्यापक नीलमणि ढुङ्गाना
अन्तरवार्ताः कोशकार प्राध्यापक नीलमणि ढुङ्गाना
२३ फाल्गुन २०७८, सोमबार १३:२९
साझा प्रकाशनले व्युत्पत्तिमूलक संस्कृत–नेपाली शब्दकोश प्रकाशन गरेको छ । नेपाली भाषामा प्रयोग भएका संस्कृत शब्दको व्युत्पत्तिसहितका शब्दहरु सङ्ग्रहीत शब्दकोश प्रकाशन गरेको हो । कोशकार प्राध्यापक नीलमणि ढुङ्गानाले नेपाली भाषामा प्रयोग गरिएका संस्कृतका शब्दहरुको निर्माण कसरी भयो भन्ने बारेमा कोशमा उल्लेख गर्नुभएको छ । कोशमा धातुका प्रतिनिधि रुप र शब्द गरी ३५ हजार शब्द व्युत्पादित छन् भने २ हजार पारिभाषिक शब्द छन् । अहिलेसम्म नेपाली भाषामा यस किसिमको शब्दकोश प्रकाशित भएको छैन । यसमा प्रयोग भएका संस्कृतका शब्दहरु संस्कृत वाङ्मयमा बढी प्रचलित छन् । केही नेपाली वाङ्मयमा पनि प्रयोग गरिएका छन् । तिनलाई देवनागरिक लिपिको परम्पारगत वार्णिक प्रणालीका क्रममा अथ्र्याइएको छ । शब्दहरुको प्रयोगस्थल निर्देश हेर्दा अधिकांश सूक्तिमय काव्यबाट लिइएको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कोशकार प्राध्यापक नीलमणि ढुङ्गानासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छ ।
व्युत्पत्तिमूलक संस्कृत–नेपाली शब्दकोश’ भनिएको छ, खासमा यो ‘व्युत्पत्ति’ भनेको चाहिँ के हो ?
‘व्युत्पत्ति’ शब्दको अर्थ ‘बहुज्ञाता’ हो, सकेसम्म बढी जान्ने । जस्तो, हाम्रो समाजमा प्रचलित छ— ‘यो केटो व्युत्पन्न छ ।’ यसको अर्थ ‘त्यो केटाले शब्द तोड्न जान्दछ’ भनेको होइन, ‘त्यो केटो कतिसम्म धेरै कुरा जान्दछ’ भन्ने तहमा ‘त्यसले सकेसम्म धेरै कुरा जानेको छ’ भन्ने अर्थबोध हुन्छ । यो शब्दकोशले कुनै पनि विषयमा सकेसम्म बढी सूचना दिने काम गरेको छ ।
व्युत्पत्ति दुई किसिमका हुन्छन्— ‘शब्दगत’ र ‘अर्थगत’ । व्युत्पत्तिमूलक शब्दकोश ‘शब्दगत व्युत्पत्ति’ मा मात्र सीमित छैन, यसले ‘अर्थगत व्युत्पत्ति’ र त्यो शब्दबाट आउने अर्थको बहुज्ञातासमेत दिन खोजेको छ । त्यसैले यसलाई ‘व्युत्पत्तिमूलक’ भनिएको हो ।
कालिदासले भनेका छन्— ‘शब्द’ र ‘अर्थ’ को सम्बन्ध अत्यन्त निकट हुन्छ । ‘उमामहेश्वर’ सम्बन्ध जस्तै ‘वाक’ र ‘अर्थ’ को सम्बन्ध छ । जहाँ शब्द रहन्छ, त्यहाँ अर्थ रहन्छ । त्यस्तै जहाँ अर्थ रहन्छ, त्यहाँ शब्द रहन्छ । त्यसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । कुनै पनि अर्थको विस्तार गर्दा शब्द नभई हुँदैन । संस्कृतमा प्रयोग भएका शब्दहरूलाई लिइसकेपछि त्यसको अर्थ कतिसम्म पर पुगेको छ ? भन्ने कुरा देखाउँदा यो विषयप्रधान कोश भएको छ । वास्तवमा शब्दकोशमा रहने शब्द नै हो । त्यसैले शब्दहरू सङ्कलन गरियो र तिनको अर्थ कति गहिरो छ ? कहाँसम्म छ ? भन्ने कुरा यसमा देखाउन खोज्दा आकार ठूलो भएको हो ।
‘विश्वकोश’ भन्दा हुन्छ किनभने विश्वकोश पनि मूलतः शब्दकै माध्यम हो । तर, विश्वकोश भनेर जुन परिभाषा गरिएको छ, त्यो सबै लक्षण यसमा मिल्छ÷मिल्दैन, म भन्न सक्दिन । तथापि संस्कृत वाङ्मयको चाहिँ विश्वकोश नै हो यो ।
सबै कुरा यसमा उल्लेख छन् । यसले विज्ञान पढ्ने तल्लो तहका विद्यार्थीलाई पनि सहयोग पु¥याउँछ । ग्रहणबारे, सूर्य, चन्द्र आदिबारे सूचना छन् । चन्द्र धरातलबाट पृथ्वी कस्तो देखिन्छ, पृथ्वीमा लाग्ने ग्रहण कस्तो हुन्छ ? त्यसको चित्रणसहित रोचक विषय छन् यसमा । त्यस्तै, विज्ञानले विभिन्न आधुनिक ढङ्गले चर्चा गरेका कुराहरू पनि संस्कृतकै हुन् । अर्थ गर्दा ती चिजहरूलाई पनि लिएको छु ।
छैनन्, मैले देखेको छैन । नेपाली भाषामा त आएकै छैन । हिन्दीमा कतै, केही छ कि भनेर खोजेँ । त्यो किसिमको देखिनँ । संस्कृतमा दुई वटा व्युत्पत्तिमूलक शब्दकोश प्रकाशित छन्— शब्दकल्पद्रुम र वाचस्पत्यम । सामान्य पाठकका लागि तिनबाट काम हुँदैन । त्यसमा पनि नेपालीपरक शब्दहरू नेपाली भाषामा आएर प्रयोग भइसकेका र नेपालीले व्यवहारमा ल्याइसकेका कुराहरू त्यहाँ पर्दैनन् । त्यस कारण यो शब्दकोश केवल संस्कृत शब्दको मात्रै भन्ने होइन । यसमा नेपाली भाषामा आइसकेका संस्कृतका शब्दहरूका आधारमा तिनीहरूको अर्थापन भएको छ, जुन संस्कृतका व्युत्पत्तिमूलक कोशहरूमा पाइँदैनन् । त्यसैले यो नेपालीका निमित्त नेपालीपरक कोश हो । मैले यसलाई नितान्त नौलो ठानेको छु ।
यो शब्दकोश भएकाले यसमा प्रामाणिक कुरा लेख्नुपर्छ । कल्पनाका आधारमा शब्दकोश बन्दैन । त्यस कारण मैले जति स्रोत भेटेँ, त्यहीअनुसार लेखेँ । प्रत्येकको स्रोत दिएको छु । बराहपुराणका आधारमा बराह क्षेत्रको लेखेँ, मुक्तिनाथको लेखेँ । प्रशस्त चर्चा भए पनि रुरु क्षेत्रबारे भनिएको सामग्री मैले त्यो बेला पाउन सकिनँ । तथापि नेपालमा जेजति धार्मिक स्थल छन्, तिनीहरूको चलनचल्तीको आधारमा मैले सूची बनाएँ । देवीको चर्चा आयो भने मेचीदेखि महाकालीसम्म कहाँ, के, कति देवी छन्, सबै लेखेँ । त्यस्तै विष्णुको विवरण दिएको छु, शिवको दिएको छु । मैले अध्ययन गर्दा के देखेँ भने वास्तवमा यो शिवशक्तिप्रधान देश हो । विष्णुको ज्यादै कम छ । तराई क्षेत्रमा अलिअलि छ । पहाडी क्षेत्रमा देवी र शिवजीका मन्दिरहरू धेरै छन् ।
कतिपय त्यस्ता शब्दहरू पनि छन् यसमा । किनभने संस्कृतमा पनि हराइरहेका शब्दहरू पछि आएका छन् । जस्तो, ‘केन्द्र’ शब्द वैदिक साहित्यमा छैन तर ज्योतिषशास्त्रमा व्यापक छ । ‘केन्द्र’ वैदिक शब्द हो वा पछि थपिएको ? हेर्दा यो पछि आएको देखिन्छ तर त्यहाँबाट आयो भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसबाट धेरै शब्द बनेका छन् । धेरै विद्वान्हरूसँग छलफल भयो— केन्द्र कि धातु हुनुपर्छ शब्द बनाउन, कि त्यसको कुनै न कुनै व्युत्पत्ति आउनुपर्छ । उहाँहरूले पनि भन्न सक्नु भएन । यसको कारण के प¥यो भने संस्कृतमा धेरै धातु थिए तर बिचमा ती लोप भए । केन्द्र पनि विभिन्न कारणले लुप्त भयो । त्यसैले त्यो हरायो, पछि त्यसलाई ल्याइयो ।
त्यसै गरी नेपाली भाषामा पनि कतिपय यस्ता शब्द छन्, जो आगन्तुक शब्द आएपछि क्रमशः विस्थापित भए । तिनलाई क्रमशः यस्तै शब्दकोशको माध्यमबाट लिएर आउनुपर्छ । ती हाम्रै शब्द हुन् किनभने बाबुबाजेको सम्पति आफ्नै मानिन्छ । संस्कृत भनेको नेपाली भाषाको आफ्नै सम्पत्ति हो । त्यसैले संस्कृतबाट आएका ती सबै शब्द आफ्नै हुन् । कतिपय शब्दहरू प्रयोग ग¥यौँ, कतिपय गरेका छैनौँ । फरक त्यही मात्र हो ।
कोशमा ३५ हजार मूल शब्द र विभिन्न सन्दर्भमा तिनको प्रयोग भएको बताइन्छ । दुई हजारभन्दा बढी तर पारिभाषिक शब्द नै छन् । एकै जनाले तयार गर्दा धेरै समय लाग्यो, अध्ययन त निकै गर्नुप¥यो होला नि ?
अर्को कुरा, केही मान्छे असहयोगी हुँदा रहेछन्, द्वेषी पनि हुँदा रहेछन् । यसले काम गर्न लाग्यो, त्यो काम गर्न दिनु हुँदैन भन्ने पनि हुँदा रहेछन् । त्यो सबै मैले खपेँ । तर, ‘कहिले कहिले मित्रको समागम’ भनेको छु मैले । आकाशमा बादल लागिरहे पनि मित्रको समागमले गर्दा बादलहरू फाटे । अनि यो काम सम्पन्न भयो । वास्तवमा ‘मित्र’ शब्दका दुई अर्थ हुन्छन्— ‘सूर्य’ र ‘सहयोगी वा साथी’ । सूर्य लागेपछि जसरी आकाशका बादल फाट्छन्, त्यसै गरी साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो, मैले यो काम सम्पन्न गर्न सकेँ । नत्र मलाई धेरै बाधाहरू थिए ।
मैले विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदै गएँ । सामग्री खोजेँ तर छैन । यताउति गरेर पढाउनुप¥यो । अर्को कुरा, धेरै अगि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा एक जना अमेरिकी आएका रहेछन्— आपूmलाई ६ महिनाभित्र संस्कृत पढाइदिने एउटा मान्छे माग गर्दै । उनले सो अवधिमा संस्कृतको पूरा जानकारी लिने इच्छा गरेछन् । तत्कालीन सदस्य–सचिव डा. तुलसी भट्टराईले मलाई लगाइदिनुभयो । तर, उसलाई केही थाहा थिएन, कुनै जानकारी नै थिएन, खाली जान्ने इच्छा मात्र थियो । फेरि भनेको कुरा बुझ्थ्यो तर उसलाई बुझाउने सामग्री भएन । मुखले भनेको भरमा जान्ने कुरा पनि भएन । त्यो विषयमा जानकारी राख्न पाए फुर्ती लाउन पाउँथ्यो उता गएर तर एकत्रित सामग्री हामीसँग भएन ।
तत्सम शब्दको समस्या नेपालीमा बढी नै देखिन्छ । पछिल्लो समय अङ्ग्रेजी माध्यमका कारण नेपाली भाषाको स्तर कमजोर भइरहेको बताउँछन् विद्वान्हरू । विज्ञहरू नेपाली भाषाको संरक्षण र विकासमा लागिपरेका छन् तर स्थिति
अझ खस्कँदो छ । अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइसँगै खस्किँदै गएको नेपाली भाषालाई उकास्न के सुझाव छन् यहाँसँग ?
नेपाली भाषाको विकासका लागि अलिकति त अहिलेको हाम्रो पाठ्यक्रममै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, वर्णविन्यासबारे विद्वान्हरूबिच बेकारको झगडा छ, त्यसलाई स्थिर गर्नुपर्छ । किनभने वर्णविन्याससम्बन्धी कुरा १०–१५ वर्षमा परिवर्तन भइरहन्छन् । यसमा झगडा गरिरहनु हुँदैन । अहिले जसले जे लेखे पनि हुने अवस्था छ नेपाली भाषामा— ह्रस्व लेखे पनि हुन्छ, दीर्घ लेखे पनि केही छैन । शब्दहरू आपूm खुसी प्रयोग गरे भइरहेको छ । यसले ‘नेपाली भाषा जेजसरी लेखे पनि हुन्छ’ भन्ने गलत मानसिकता आइरहेको छ मान्छेहरूमा । एक किसिमले अनियन्त्रित अवस्थामा छ नेपाली समाज । यसबाट खास गरेर तत्सम शब्दको पहिचान र प्रयोगमा विद्यार्थीलाई समस्या छ । किनभने केटाकेटीले कुन तत्सम, कुन तद्भव, कुन आगन्तुक भनेर कसरी चिन्ने ? त्यसका कुनै आधारभूत किताबहरू लेखेको देखिँदैन । त्यसैले तत्सम, तद्भव र आगन्तुक नभनेर नेपाली भाषाको व्याकरण लेख्नुपर्छ । ती सबै नेपाली भाषाका शब्द हुन् । संस्कृतबाट आएका पनि तत्सम नेपाली शब्द हुन्, तद्भव नेपाली भयो, आगन्तुक पनि नेपालीमै ल्याइएको हो । नेपाली भाषामा यस्ता नियमहरू बनाउनुपर्छ, जसले सबैलाई समेटोस् र विद्यार्थीलाई सिक्न÷सिकाउन सजिलो होस् । ‘तत्सम जस्तो लेखेको छ त्यस्तै लेख्ने, नेपालीमा यस्तो लेख्ने, आगन्तुकलाई यसरी प्रयोग गर्ने’ के भनेको यो ? मैले बुझेको छैन त्यसको अर्थ ।